Home News मेरो पनि भन्नु छ देश परदेश Download Listen Live Contact Back
सांसदहरुको तलब बढाउने प्रस्तावका हामीलाई केहि गुनासो छैन, तर संख्या कम हुनुपर्यो । सांसदको सङख्या एक सयको हाराहारी होस् । अनेकन नामका भत्ता नहोस् अनि काम चाहिँ तलब अनुसारको होस् ।
नेपालको जहाजहरु कहिले सकुशल उडान र अवतरण हुने हो कुन्नी ? कहिले डाँडामा ठोकिने, कहिले टायर पड्किने, कहिले बादरसँग ठोकिने, कहिले धावनमार्गमा मरेको चराले जहाजको अवतरण नै दुई चार घण्टा बन्द गरिदिने । सबै व्यवस्थापन पक्ष र एयरपोर्ट कर्मचारी कै लापरवाही र कमजोरीपन हो भन्दा फरक नपर्ला ।
माओवादी केन्द्रले नेतृत्व गरेको सरकारको एक सय दिन पुग्यो भनेर मात्र हुँदैन । असुन्तुष्ट दलहरुका उचित माग सम्बोधन गरी संविधान कार्यान्वयन गर्नुहोस् । कतिञ्जेल आफनो बोली अकाट्य झैं गरेर बस्ने ?
​मैनजार राय यादव
मृगौला पीडितलाई सबै डायलोसिस सित्तैमा अनि भिआइपीहरुको लागि उपचार खर्च १५ लाख भन्दा बढी नपाउने स्वास्थ्य मन्त्री गगन कुमार थापाको नीति एक दकदमै मन पर्यो । यो निर्णय छिट्टै कार्यान्वय होस् ।
भारतीय एक हजार र पाँच सयका नोट नचल्ने भए तर यस्ता नोट नेपाली बजारमा धेरै छन । अब चाँडै नेपालका बैङ्कहरुले यी नोटको सटही गर्ने सहज बाताबरण मिलाउनु पर्यो ।
नागरिकले सिटामोल पाएका छैनन् । तर नेताहरु चाहिँ उपचारका लागि सरकारसँग करोडौं माग्छन् । के नेतासँग उपचार गर्ने पैसा नै नभएको हो ? सबै नागरिकले स्वास्थ्य सेवा पाउने कहिले होला ?
बहिर्गमित पुर्व लडाकुले माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडा कब्जा गरेको खबर पढ्दा दुख लाग्यो । के गर्नु उमेर जति युद्ध लड्दैमा बित्यो । त्यत्रो संघर्ष उपलब्धी शुन्य भएपछि आउने यो सामान्य आक्रोस हो ।
इपिएल क्रिकेटपछि नेपाली क्रिकेट शून्य प्राय भएको छ । अहिले नेपाली क्रिकेट टिम के गरिरहेको छ ? यसमा संचार माध्यमले झक्झकाउने कि ।
​ विष्णु लिम्बु
काठमाण्डु उपत्यकामा परिक्षण स्वरुप लोडसेडिङ मुक्त गरिएको खबर सुन्दा खुसी लाग्यो । बुद्धिको भाँडोमा कमिसन र घुसको विर्को लागेर मात्रै हो । नत्र भने गर्दा सम्भव त रहेछ नी । यति मात्रै होइन काठमाडौँमा फोहोर र दिसा पिसाबलाई सही सदुपयोग गरेर काम गर्ने हो भने उपत्याभरिलाई पुग्ने बिजुली र ग्याँस त्यही फोहोर बाट निस्कन्छ ।
नेपालको ऐन कानुन र संविधानको धज्जि उडाउदै आएका लोकमानले सर्वोच्चलाई के गन्लान र ? तर पनि आसगरौं हिरोको रोल लाष्टमा भन्छन । जवाफ दिन्छनकी ?
भारतका राष्ट्रपतिलाई नेपाल बोलाउँदा हामीलाई धर्मशालाको फाइदा भयो । अब ओबामालाई बोलाउनुपर्यो । कतै विद्यालय खोलिदिन्छन कि । हाम्रो भाइबहिनीले स्कूल पढ्न दुइ तीन घण्टा हिँड्नु त पर्दैनथ्यो ।
मुखर्जीको नेपाल भ्रमण नागरिकका लागि कागलाई बेल पाग्यो हर्ष न बिस्मात जस्तै ।
​रमेश कस्यप अधिकारी
मुखर्जीको भ्रमणलाई आवश्यकता भन्दा बढी महत्व दिइयो । भिभिआइपि सवारी भनेर एम्बुलेन्स रोक्नु एकदमै दुखद हो ।
दिनदिनै नागरिकका अधिकार हनन् हुँदा पनि नेपालका मानवअधिकारकर्मी किन चुपचाप बसेका ? जनावरमाथी अपराध हुँदा त आवाज उठ्न थालेको बेला नागरिकको अधिकार कुण्ठित हुनेगरी सरकारले गरिरहेको क्रियाकलापमा मानवअधिकारवादीले मुख खोल्न जरुरी छ ।
अतिथी देवो भव नेपालीको मुल मन्त्र हो । नेपालीले यसलाई अंगालेका पनि तर छिमेकी देशका राष्ट्रपती नेपाल आउँदाको स्वागत अनि चाकरीपन धेरै नै भएकोले यति धेरै विरोध भएको हो भन्ने कुरा सरकारले हेक्का राख्नुपर्छ ।
कहिँकतै रमझम छ सयपत्री, मखमली छ, सप्तरंगी टीका छ।। म परदेशीको निधार फिका फिका छ अतितको सम्झना चेलिबेटीको माया अनि आँखामा आँसुको ढिका छ ।।
​राज एक रहस्य
दसैँ तिहार त राम्रो सँग मनाइयो । अब पालो संविधान कार्यान्वयनको हो । सबै दल र नेता स्थानीय चुनाव गराएर संविधान कार्यान्वय तर्फ लाग्नु पर्छ ।
नेपालमा जति पटक सरकार फेरिए । सबै सरकारले २ वर्षमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने घोषणा गर्छन् तर पूरा हँुदैन । यसको मतलब नागरिकलाई झुक्याउने मात्रै हुन सबैले । त्यसैले मेरो आग्रह नागरिकलाई झुठो आश्वासन नदेउ । अनि झुक्याउन पनि छोड ।
​मुकेश ठडिया यादव
लोकमानको महाअभियोग प्रस्तावमा कुनैकुनै नेतालाई निन्द्रा नलाग्ला तर नागरिक पनि सुतेका छैनन् । मनलाग्दी गर्न पाइँदैन ।
विरोध र गाली सबै राजनीतिक दललाई गरिएको छ । जोसुकै आएपनि राजनीतिक स्थिरता होस् र अहिलेको राजनीतिक प्रणाली नै हटाउनु आवश्यक छ जस्तो लाग्छ ।
यदी नेपालका भ्रस्टाचारिले एक पुस्ताको लागि मात्र पुग्ने गरि भ्रस्टाचार गर्ने हो भने नेपालको अहिलेसम्म विकास भइसक्थ्यो होला । तर यहाँ त पुस्तौं पुस्तालाई पुग्ने गरी भ्रष्टाचार गर्छन ।
हामी नेपाली, चार्ड पर्व संस्कृतिको धनि । तर तडकभडक गर्नाले यहि चार्ड,पर्व र संस्कृतिले हामीलाई गरिब बनाई रहेको छ । जीवन जिउनको लागि कुन चाहि बढि महत्वपूर्ण त्यसको हेक्का हामीले राखेनौँ भने जीवन सधै असहज बन्न सक्छ ।
लोकमानको घरमा म्याद टाँस्न जाँदा पटकपटक अनुपस्थित हुने वडा सचिवको चालले नै देखाउँछ सरकारी कर्मचारी कस्ता छन भनेर ।
तराईका ८ वटा जिल्लामा चर्पी बनाउने काम तिब्र भएको खवर सुन्दा धेरै खुशी लाग्यो तर अझै पनि धेरै ठाउँमा मानिसहरु विभिन्न संस्थाले दिएको चर्पीको रिङ र पाइपलाई बेवारिसे बनाएर खुल्ला ठाउँमा दिशा गरिरहेका छन् । त्यसैले सरकारले सबै भन्दा पहिला जनचेतनामै ध्यान दिनुपर्छ, नत्र चर्पी बनेपनि सरसफाई अभियान भने सफल हुँदैन ।
​सुनिल गेलाङ मगर
हुनेको जहि त्याहि नहुनेको कहि न कहि भनेको हो रहेछ । ग्रामिण सडकमा गाडी भाडा एक चौथाई बढेछ । त्यो पनि दशैंले रे । हैन अब यो कसले देख्ने, अनि कसले बोलिदिने ?
दसैंको समयलाई लक्षित गरेर रोकिएको डाक्टर गोबिन्द केसीको अनशन फेरी शुरू भएको देख्नु नपरोस्, उहाँको जायज माग छिटो संबोधन गरी कार्यान्वयन गर्न सरकार लागिपरोस् ।
​कृष्ण प्रसाद भुसाल
कोशी राजमार्गमा सवारी नचलेर पैदल हिडेकाहरूको लाइन हेर्दा लाग्छ म कुनै पदमार्गमा छु । समयमा सडक मर्मत नहुँदा आजभन्दा ठ्याक्कै १२ वर्ष पहिलेको याद आयो, ७ घण्टा राजमार्गमा हिडेर बसन्तपुर पुगेर बस चढेको, यस्ता ठाउँमा सम्बन्धित निकायको ध्यान जानु प¥यो ।
अनुपम अनुभव । दसैँको महत्व अझै बढे जस्तो । विदेशमा रहेकाहरु जन्मथलो फिर्ता । साथीसंगी भेटघाट । कति जोडीको मंसिरमा घरबार जोड्न दसैँमा टीकाटाला । साच्चिकै गर्व गर्न लायक मौलिक चाड ।
काठमाडौंको मुलपानीमा क्रिकेट मैदान बन्दै छ भन्दा खुसी लाग्यो । तर बल्ल बल्ल बन्न थालेको मैदानमा आएको समस्यालाई पनि संविधान बनाउन लगाए जस्तो धेरै समय नलगाइयोस् ।
उज्यालोले नेपाल दर्पणमा सुरु गरेको नयाँ स्तम्भ साना लडाकुका ठूला संघर्ष सुरु गरेछ । शसस्त्र युद्ध लडेका लडाकुको कुरा उठाएको सुन्दा खुशी लाग्यो तर उनीहरुप्रति राज्यले गरेको व्यवहार सम्झिएर अचम्म पनि लाग्यो ।
चुनाव गर्छौ नभनुन्जेल तयार छौं भन्ने तर मिति तोक्न थालेपछि सकिँदैन भन्ने निर्वाचन आयोग सहितका कर्मचारीका कुरा सुन्दा नाच्न नजान्ने आँगन टेडो भन्ने उखान याद आयो । कर्मचारीले सक्दैनौं भन्नुको साटो तयारीमा लाग्नु राम्रो होला ।
याद रहोस्, छिमेकीको हामी प्रति विकास र समृद्धिको भन्दा पनि अरु राजनीतिक अभिष्ट पनि लुकेको हुन सक्छ । जुन आन्तरिक एकताको मूल्यसँग जोडिन्छ । त्यसैले यो भ्रमणले सके आर्थिक सद्भाव ल्याओस तर राजनीतिक विवाद नल्यायोस् ।
म भुकम्प पीडित अहिले म गाईसँगै गोठमा बसिरहेको छु । के तेह्रथुमका पीडितले चाहिँ पुननिर्माण प्राधिकरणको अनुदान पाउँदैनन ? दिन्छ भने कहिलेसम्ममा सम्झौता हुन्छ ?
दुई किलो चामलका लागि तोक आदेश लगाउन पर्ने ठाँउमा बीस किलो दिनु के नराम्रो हो र? कर्णलीका हुने खानेलाई समस्या नहोला चामलको भात खान तर गरिबलाई त समस्या छ नी त्यसैले सरकारको योजनाले उनीहरुलाई फाइदा हुन्छ ।
अचम्म छ सरकार देशमा रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नुको सट्टा वैदेशिक रोजगारीमा अवसर र सिर्जना बढाउदै छ, के रेमिट्यान्सले मात्र देश चल्छ ?
सरकारले भुकम्प पीडितलाई लाखौं लाख दिने भनेर नदिनु भन्दा यस अघिको सरकारले घोषणा गरेको एक घर एक रोजगारको घोषणा कार्यान्वयन गरे कति राम्रो हुने थियो । पैसा दिँदा अरु धेरै कुराको समस्या हुन्छ त्यसैले सरकारले आफैं घर बनाइदिए हुन्थ्यो ।
महिला क्रिकेटको हालत सुनेर टिठ लाग्यो, नेताको लागि करोडौ बाँड्ने सरकारले देशको गरिमा र इज्जत राख्ने खेलाडीलाई खाजा समेत बाँड्न सकेन ।
सरकारले मृगौलाका बिरामीलाई सहुलियतमा दिने भनिएको उपचार सेवाको नियम झन्झटिलो छन् । कागजात जुटाएर प्रक्रिया पुरा गर्दा गर्दै बिरामीलाई बचाउन सक्ने समय जान्छ अनि के गर्नु ?
​थाक्लुङ मिलन लिम्बु
नेपालमा जो प्रधानमन्त्री भएपनि केही हुँदैन । प्रधानमन्त्री, नेता, कार्याकर्ता सबै एक अर्काको नराम्रो कुराको मात्र चर्चा गर्दै आरोप प्रत्यारोपमा लागिरहन्छन् अनि कसरी बन्छ देश ?
नेपाली क्रिकेट जगतले विश्वमा सफलता चुम्नै लाग्दा क्यान भित्रको विवादले धेरै खल्लो लागेको छ । उहाँको प्रश्न छ, खेल जगत पनि पुरै राजनीतिमय ? यो कस्तो खेल हो सरकार ?